Sunta Rinjiga & Arrimaha Xaqa sharciga ah ee Khuseeya Qoysaska | Kids Legal Skip to main content
Sunta Rinjiga & Arrimaha Xaqa sharciga ah ee Khuseeya Qoysaska
Sidee ayey ku dhacdaa sunta rinjiga ku jirta
Sunta rinjiga waxa ay ka dhalataa budada iyo waxyaabaha ka soo fuqa rinjiga. Budadu waxa ay gaartaa alaabada ilmuhu ku ciyaaraan iyo gacmaha ilmaha marka ay dhuka taabtaan. Intaa ka dib, ilmaha sunta gaartaa marka ay neefsadaan ama ay afkooda gaarto.
Sidee Ayaa Sunta Rinjiga Ku Jirta Dhaawac Ugu Gareysan Kartaa Caruurta
Suntan noocan waxa ay dhibaato u geysataa maskaxda iyo habdhiska dareenwadka. Suntani waxa gaabis ka dhigtaa koritaanka ilmaha. Sunta noocan ah waxa ay keentaa dhibaatooyin la xiriira iyo dhaqanka. Suntan waxa ay dhibaato u geysataa maqalka iyo hadalka.
Ma jiraan wax calaamado ah oo ka muuqanaya qofka marka uu ku dhacayo sumowgu ku dhacayo. Laakiin dhibaatadiisu waxa ay ilmaha kaga tagtaa dhibaato joogta ah.
KIDS LEGAL waxa ay kaa caawin sidii qoyskaagu uga badbaadi lahaa sunta.
Waxa aan kuu sharxeynaa sida aad ilmahaaga uga baari karto. iyo sida aad gurigaaga uga baari karto. Waxa aan kaa caawin karnaa in aan xaqiijino in dhismaha gurigaagu yahay mid aan laheyn suntan. Dayactirka guryaha ayaa dhalin kara busta suntan. C alaamadda hoos ku qoran ka raadi dhisaha si aad u xaqiijiso in kuwa dhisay ay heystaan ogolaasho rasmi ah Aan Lahevn Sunta (Lead-Safe).
KIDS LEGAL waxa ay ilaalin karaan xuquuqda ilmahaaga haddii ay qoyskaaga soo gaarto suntan.
Kim Trombley 207-400-3267 ktrombley@ptla.org
Nicole R. Bissonnette 207-400-3227 nbissonnette@ptla.org
KIDS LEGAL Lead Paint Project
37 Park St., Suite 401 PO Box 398
Categories: Lead PaintTags: leadlead paintlead poisoning News